Wasiirka amniga oo warbixin ku saabsan caruur laga soo bad-baadiyay Al-shabaab ka jeediyay kulankii golaha wasiirada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka amniga oo warbixin ku saabsan caruur laga soo bad-baadiyay Al-shabaab ka...
Wasiirka amniga oo warbixin ku saabsan caruur laga soo bad-baadiyay Al-shabaab ka jeediyay kulankii golaha wasiirada.
Shirka Goloha Wasiiradda ee Xukuumadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, oo uu shir gudooominayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta looga hadlay, soo bandhigidda jadwal-howleedka shaqo ee tubta siyaadda loo dhanyahay, Warbixin ku hadlaysa xaaladda Wabiyadda Daawad iyo Shabeelle, Sharciga Shirkadaha oo loo qaybiyay goloha wasiiradda, Warbixn ku saabsan shirka Dhaqaalaha Aduunka, Amniga dalka iyo arrimo kale.
Wasiirka Amnigga Gudaha Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa laga dhagaystay warbixin ku saabsan 37 caruur ah oo ay Shabaab qaataan kuwaas oo lagu tobobarayay gobolka Shabeelladda Hoose, si ay ugu adeeg sadaan qaraxyadda iyo fallalka argagaxnimo ugana dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed. Waxuuna Wasiirku sheegay in lagu guulaystay dhamaantood in la soo qab-qabto, waxayna haatan ku jiraan gacanta dawladda.
Wasiirka Gaashaadhinga Soomaaliya Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay isku dhafka ciidamo qaran, waxuuna sheegay in ay meel fiican marayaan habkii la iskugu dhafi lahaa ciidamada dalka, isgoona tilmaamay in lagu howl jiro xarumihii la dajin lahaa ciidamada. Sidoo kale waxuu sheegay in gobolka Shabeellada Dhaxe laga sifeeyay kooxda Alshabaab, haatana la diyaarinayo qorshihii lagaga saari lahaa gobolka Shabeellada Hoose.
Wasiirka Qorshaynta iyo Xariirka Caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xassan ayaa laga dhagaystay warbixin ka hadlaysa shirkii dhawaan uu Ra’iisul Wasaarahu ugu qayb galay wadanka Switzerland ee ku saabsanaa dhaqaalaha Aduunka. Isagoona sheegay in ay ku shirka ku soo bandhigayn khayraadka Soomaaliya, sidoo kalena waxay codsadeen in laga cafiyo daymaha caalamiga ah ee lagu lee yahay dalka Soomaaliya.
Wasiirka Qorshaynta Soomaaliya ayaa cadeeyay in Ra’iisul Wasaare Khayre uu si wayn madaxda caalamka ugu faah-faahiyay nabada iyo xasiloonida ka jirta Soomaaliya, si ay u maalgashadaan dalka, shacabkuna ay ugu faa’iidaystaan. Sidoo kalena waxuu shacabka Soomaaliyeeda u soo jeediyay in ay bixiyaan canshuurta, si daymaha aan iskaga bixino.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa ka warbixiyay shirar kala duwan oo uu kaga qayb galay dalalka Kenya, Itoobiya iyo sucuudiga, waxuuna soo bandhigay heshiisyada ay Soomaaliya la gashay ururka Iskaashiga Islaamka ee (OIC) , waxuuna cadeeyay in Soomaaliya ay barbar taagan dalalka Islaamka.
Dhanka kale waxuu faah-faahin ka bixiyay shirka Ururka AU, oo Madaxwaynaha Soomaaliya uga qayb galay Itoobiya, isgoona tilmamay in ay Soomaliya u tartamayso xilka xoog-haya fulinta ee Ururka goboledka IGAD, maadaama ay Soomaaliya markale saaxadda aduunka ku soo laabatay, ayna doonayso in ay kalinteeda ka qaadato.
Wasiirka Wasaarada Beeraha, ayaa madasha ka khriyay warbixin ka hadlaysa mashruuc biyo xireen ah oo ay iska kaashanayaan dalalka Kenya iyo Itoobiya kaas oo laga dhisayo xadduudka ay la wadaagaan Soomaaliya. Waxuuna wasiirka iftiimiyaya saamaynta ay ku yeelan karaan wabiyadda Daawad iyo Shabeelle oo xadduud la wadaaga labada dal. intaas ka ka dib Ra’iisul Wasaaraha ayaa magacaabay Guddi heer Wasiir ah oo ka kooban Shan Wasaaradood oo kala ah, Wasaaradaha Arrimaha Dibadda, Maaliyadda, Xanaaanadda Xoolaha, Beeraha iyo Waraabka iyo Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha, oo si dhow ula socondoona biyo xireenka labada dal.
Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa goloha Wasiirada u qaybiyay Sharciga Shirkadaha Soomaaliya, si ay usoo akhristaan ka dibna loo ansixyo, waxuuna faah-faahiyay sharcigan iyo waxyaabaha uu ka hadlayo, isgoona qeexay faa’iidooyin uu shacabka u leeyahay. Sidoo kalena waxuu iftiimayay sida loogu bahaan yahay in la helo sharciga Warshadaha Soomaaliya.
Previous articleDhalinyara ka kala yimid qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir oo taba-bar loogu soo xiray Muqdisho-(sawirro).
Next articleTababarayaasha Milliteri ee Jarmalka ka joogay Soomaaliya oo waqtigooda dhammaystay.